उच्च रक्तचापका बिरामीले गर्ने गल्ती, जसले खतरा निम्त्याउँछ ! – Saurahaonline.com
उच्च रक्तचापका बिरामीले गर्ने गल्ती, जसले खतरा निम्त्याउँछ !
यसैगरी, औषधि खाने तर मदिरा र चुरोट नछाड्ने, आफ्नो तौल घटाउन नसक्ने र तनाव नियन्त्रण गर्न नसक्नेलाई पनि औषधिले अपेक्षित फाइदा नपु¥याएको हुन सक्छ ।
व्यक्ति र उसको अवस्था हेरेर औषधि दिने र डोज मिलाइयो भने मात्रै रक्तचाप नियन्त्रणमा आउन सक्छ।
त्यसैले रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने कुरामा हरेक व्यक्ति सुरुदेखि नै सचेत हुनुपर्छ । हामीले दैनिक खाने गरेको नुनको मात्रा घटाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी र पहिलो कदम हुन सक्छ । नुन कम खाँदा मात्रै पनि धेरैलाई असामयिक निधनबाट जोगाउन सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ